January 25, 2018 – Kalika Khabar
देउबाले देशलाइ कंगाल बनाउन लागे: केपि ओलि
January 25, 2018 adminLeaveaComment on देउबाले देशलाइ कंगाल बनाउन लागे: केपि ओलि
२०७४ माघ १० काठमाडौं । ७० बर्षमा दिइने गरिएको सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्ध भत्ता ६५ बर्ष कै उमेरमा दिइने सरकारले निणय गरेको छ।जसलाइ नेकपा एमाले अध्यक्ष क. केपि ओलिले भने `देउबाले आफू हारेर सिदियपछी देशको ढुकुटी सिद्द्याउन लागे। देश कङ्गाल बनाउन लागे। यो सरकारको अन्तिम निर्णयहरुलाइ खारेज गर्ने ओलिले भने। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा […]
प्रदेश संसदमध्ये १०% मन्त्री: बाम कार्यदल
January 25, 2018 adminLeaveaComment on प्रदेश संसदमध्ये १०% मन्त्री: बाम कार्यदल
२०७४ माघ १० काठमाडौं । आज बसेको बाम कर्यदलले कसरी मन्त्री मण्डल बनाउने भन्ने बिसयमा छलफल गर्यो। नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका नेताहरुले १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने एमाले नेताले बताए।तर संविधानमा कुल संसदको २० प्रतिशत सम्म मन्त्री बनाउन पाउने ब्यबस्था छ। सिंहदरबारमा बसेको वामगठबन्धनको बैठकमा प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाउने सहमति भएको हो […]
January 25, 2018 adminLeaveaComment on एक हप्ता पछि बढ्यो नेप्से।
२०७४ माघ १० काठमाडौं । बुधबार शन्यू दशमलव बार्ह नम्बरले नेप्से बढेको छ। निर्न्तर बढ्न नसकेको नेप्से बुधबार थोरै भएपनी उकालो लागेको छ। यो दिन २ घण्टा सम्म बढेको नेप्से तेस्रो घण्टाबाट पुनः घटेको नेप्से परिसुचकले जनाए। बुधवार अन्तिममा नेप्से १० मिनेटमा एक दशमलव ६९ अङ्कले बढेर एक हजार ३ सय ९४ दशमलव ७३ बिन्दुमा […]
राजपाले जनजाति, मुस्लिम, आदिवासि र दलितलाई संसद बनाएन!
January 25, 2018 adminLeaveaComment on राजपाले जनजाति, मुस्लिम, आदिवासि र दलितलाई संसद बनाएन!
२०७४ माघ १० काठमाडौं । आफ्नो समानुपातिक तर्फको १० सिटमध्ये दलित, जनजाति, आदिवासी र मुस्लिम लाई छुटाउदा राजपा भित्रका यो समुदाय असन्तुष्ट भएका छन। राजापाले पिछडिएका समुदायलाइ बाइपास गरेको भन्दै राजपा भित्र बहस चलेको छ।
राष्ट्रिय सभामा ८३ जना उम्मेद्बार
January 25, 2018 adminLeaveaComment on राष्ट्रिय सभामा ८३ जना उम्मेद्बार
२०७४ माघ १० काठमाडौं । हिजो बुधबार भएको उम्मेद्बारी दर्तामा ८३ जनाले उम्मेद्बारी दिएका छन। राष्ट्रिय सभामा ५६ जना चुनिने ब्यबस्था छ। जसमध्ये १७ जना निर्विरोध भए। प्रदेश न.१ बाट १२ जना, प्रदेश न.२ बाट ९ जना, प्रदेश न.३ बाट १७ जना, प्रदेश न.४ बाट १२ जना, प्रदेश न.५ बाट ११ जना, प्रदेश न.६ बाट […]
अब ६५ बर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउने।
January 25, 2018 adminLeaveaComment on अब ६५ बर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउने।
२०७४ माघ १० काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा दिइने वृद्ध भत्ता अहिले ७० बर्ष मा दिइन्छ। उमेरहद घटाएर अब ६५ बर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिइने भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ५१ साल देखि वृद्ध भत्ता दिन थालेको हो। त्यसपछिका विभिन्न […]